N'ogbe Soy wax mason iko ite votive kandụl ụlọ ọrụ na-emepụta | Mmeri
AKWKWỌ WINBY & AKA AKA
Professional Manufacturing kandụl N'ihi afọ 20
ihe njide oriọna kandụl
amba iko ite omenala na-esi ísì ụtọ kandụl
matte eke wax esi ísì ụtọ okomoko kandụl-acha anụnụ anụnụ
matte iko soy esi ísì ụtọ atụmatụ kandụl
Natural Bee waks kandụl maka ji achọ
kpara owu kandụl mkpuchi maka N'onwe
Kandụl Wick Trimmer / Wick Dipper / Wick Snuffer
Lọ ọrụ na-arụpụta maka kandụl nke ụka - Organic ...
High Quality maka Long-adịgide adịgide kandụl - Ceramics ja ...
Soy wax mason iko ite votive kandụl
The kandụl iko kandụl na-eji 100% eke soybean wax, nke bụ environmentally friendly na-abụghị na-egbu egbu. O nwere ike ijide waksị 250 nke ị ga - eji ọkụ ruo ogologo oge. Enwere ike ịhazi aha mmado dị ka mmasị gị si dị. Agba nke wax dị iche iche na-adabere na-esi isi ụtọ ị na-ahọrọ, dị ka oroma, pink, na-acha anụnụ anụnụ. Na-eme onyinye zuru oke maka ndị enyi, ndị ezinụlọ, ma ọ bụ maka onwe gị.
Size: 9cm (Obosara) * 11m (Elu)
Soy wax mason iko ite votive kandụl na uzo kandụl akpa
Kandụl ahụ na-egbukepụ egbukepụ. Ọ na-esi ísì ụtọ site na mmalite mana ọ bụghị ike. Ọ gbara ọkụ ọbụna na ite ahụ dị mfe ma maa mma.
Ọ na-esi isi nke ọma ma na-eme oke okpukpo maka ụlọ m na-amụ ime ụlọ / ime ụlọ.
Agba, isi, logo na mbukota niile nwere ike ịhazi !!!
Ọzọkwa nye sample ọrụ.
Ihe onwunwe Clear iko ite + soy waks + mkpuchi ọla
Nha 9cm (Obosara) * 11m (Elu)
Akara Omenala dị ka ndị ahịa chọrọ
Wax arọ 250g
Mkpokọta nha 515g
Na-esi isi Site na CPL & Symrise. Enwere ike ịhọrọ 2%, 3%, 5%, 10%
Ojiji Mma ụlọ maka yoga, ememme, nkwari akụ, agbamakwụkwọ, oriri, spa na ịhịa aka n'ahụ.
Ọrụ Omenala / ODM OEM / sample
MOQ 3000 PC. Obere iwu nwere ike ịnakwere ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa.
Nke mbụ, anyị nwere akwụkwọ n'okpuru ọkọlọtọ Euro. Kandụl anyị dị mma maka ọkọlọtọ ndị Europe, yabụ ikwesighi ichegbu onwe gị gbasara kandụl anyị. Anyị na ngwaahịa na-exported ọtụtụ mba na mpaghara, dị ka United na-ekwu, Russia, Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ, wdg Ha na-ọma natara site na ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
Nke abụọ gbasara akụrụngwa, anyị na-eji paraffin wax, soy wax, wax aesụ na ndị ọzọ na osisi wax dị ka akụrụngwa nke kandụl. Soy wax nwere ike ibu ihe dị ka 10% nke mmanụ dị mkpa ma nyekwa ezigbo ísì ụtọ. Na soy wax enweghị ọgwụ ma ọ bụ ihe eji esiji ákwà.
Nke atọ maka isi, anyị na-eji ihe karịrị 100 iche-iche nke ahọrọ isi maka kandụl. Anyị na-esi ísì ụtọ na-eweta CPL aromas na Firmenich. Ha niile bụ n'elu ụdị ndị na-esi ísì ụtọ na ụwa. A na-enweta isi ndị a site na iji ísì ụtọ yana mmanụ dị mkpa, ma ga - enyere gị aka ịmepụta ikuku dị mma. Maka isi, anyị nwere ike ịnye isi ọma dị ka ịchọrọ. Ọ bụrụ na isi ọma na-amasị gị, ịnwere ike ịhọrọ mmanụ 10% na kandụl; ma ọ bụrụ na ị na-amasị adụ isi, ị nwere ike họrọ 5% mmanụ na kandụl.
Na mgbakwunye, anyị nwere onwe anyị imewe na ịzụlite ngalaba, na anyị nwere ike inye ODM na OEM ọrụ maka ndị ahịa. Anyị na-enye ọrụ zuru oke site na echiche mbụ na ngwaahịa ndị akwadoro ikpeazụ. Ndị ọkachamara anyị ga-enyere gị aka imezu ebumnuche gị.
Nke gara aga: eke soy mason ite na-esi isi kandụl
Osote: Elu àgwà esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ kandụl
Soy Wax kandụl esi ísì ụtọ
Soy Wax Glass esi ísì ụtọ kandụl
Tinyere esi ísì ụtọ
Yankee kandụl esi ísì ụtọ
Nkịtị aromatherapy na-esi ísì ụtọ onyinye soy kandụl
10oz spraying Polish iko kandụl ite na bamb ...
Electroplated okomoko Soy Wax esi ísì ụtọ Glass ite ...
100% kandụl bụ ezigbo eke kandụl
ọhụrụ imewe ji achọ kandụl
onwe logo ji achọ kandụl-Blue / Grey / Red
Akwụkwọ Akụkọ Nọrọ na-ege ntị maka Mmelite
4-E-428, Ndagwurugwu Science Science, Nke 3088 Lekai North Street, Baoding, Hebei, China